The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010) - Myanmar Asian TV
Narnia ဆိုတဲ့ ထူးခြားဆန်းကြယ်တဲ့ မှော်ကမ္ဘာလေးမှ ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်… Narnia ဇာတ်ကားတွေနဲ့အတူ ငယ်ဘဝက အမှတ်တရ ပုံရိပ်တွေဆီကို တခေါက်လောက် အလည်ပြန်သွားကြလိုက်ရအောင်…
Narnia ဇာတ်ကားများဟာ ကမ္ဘာကျော် British စာရေးဆရာကြီး C.S. Lewis ရေးသားခဲ့တဲ့ စိတ်ကူးယဉ်စာပေအမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်… စာအုပ်အနေနဲ့ စုစုပေါင်း ၇ အုပ် ထွက်ရှိထားပြီးတော့ ရုပ်ရှင်အနေနဲ့ကတော့ ၃ ကား ထွက်ရှိထားပါတယ်… Narnia စာအုပ်များဟာ နာမည်ကြီး The Lord of the Rings စာအုပ်များနှင့်အတူ ခေတ်ပြိုင် ကျော်ကြားခဲ့ပါသေးတယ်…
ယခုတင်ဆက်ပေးမယ့် ဇာတ်ကားကတော့ The Chronicles of Narnia ဇာတ်ကားတွေထဲမှ 2010 ခုနှစ်မှာ တတိယမြောက် ထွက်ရှိလာခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံး ဇာတ်ကား The Voyage of the Dawn Treader ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…
ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေး ပြောပြပေးရမယ်ဆိုရင် – အားလုံးပဲ သိကြတဲ့အတိုင်း Prince Caspian ရဲ့ အဆုံးသတ်နားမှာ Aslan ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း Peter နဲ့ Susan တို့ဟာ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြားတစ်ခုကို ရောက်ပြီဖြစ်တာမို့ Narnia ကို နောက်တကြိမ် ထပ်လာခွင့်မရှိတော့ပါဘူး… ဒီဇာတ်ကားဟာ Prince Caspian အပြီး Narnia အချိန် သုံးနှစ်ကြာပြီးနောက်မှာ ဖြစ်ပျက်မယ့် အဖြစ်အပျက်တွေကို ရိုက်ကူးပြသထားတာပါ…
ဇာတ်လမ်းရဲ့အစမှာတော့ Peter နဲ့ Susan ဟာ အမေရိကကို ရောက်ရှိနေပြီး Edmund နဲ့ Lucy လေးတို့ကတော့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံက Cambridge မြို့လေးမှာ သူတို့ရဲ့ ဝမ်းကွဲညီ/မောင် ဖြစ်တဲ့ စာဂျပိုးကောင်လေး Eustace တို့ မိသားစုနဲ့အတူ နေထိုင်ရပါတယ်… Eustace ဟာ Edmund နဲ့ Lucy ကို ကြည့်လို့မရသလို သူတို့တွေဟာ အချင်းချင်း မတည့်ကြပါဘူး…
တနေ့တော့ သူတို့သုံးယောက် Lucy ရဲ့ အခန်းထဲမှာ အချင်းများနေကြတုန်း နံရံပေါ်မှာချိတ်ဆွဲထားတယ့် ” ပင်လယ်ပြင်ပေါ်က သင်္ဘော ” ပုံ ရေးဆွဲထားတဲ့ ပန်းချီကားတစ်ချပ်ဟာ ရုတ်တရက်ဆိုသလို အသက်ဝင်လာပြီး, သူတို့ သုံးဦးကို Narnia ရဲ့ ပင်လယ်ပြင်ဆီသို့ ခေါ်ဆောင်သွားစေခဲ့ပါတယ်…
အဲ့ချိန်မှာပဲ သူတို့ အရင် Telmarine ဘုရင် Mirazက နယ်နှင်ဒဏ်ပေးခဲ့ Telmarine သခင်ကြီး ခုနှစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာနေတဲ့ ဘုရင် Caspian ရဲ့ သင်္ဘော Dawn Treader နဲ့ တွေ့ခဲ့ပါတယ်…
အဲ့နောက်မှာတော့ Edmund, Lucy နှင့် Caspian တို့ဟာ သင်္ဘောသားများနှင့်တကွ သခင်ကြီး ခုနှစ်ယောက်ကို လိုက်ရှာရင်း Narnia ကို ကယ်တင်ဖို့ ရေလမ်းခရီးမှာ စွန့်စားခန်းမှာ ဖွင့်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်…
အရင် The Lion, The Witch & The Wardrobe နဲ့ Prince Caspian မှာ မြေပြင်စစ်ပွဲများကို အရသာရှိစွာ ကြည့်ရှုခံစားရပြီးနောက် ယခု The Voyage of the Dawn Treader မှာတော့ ပင်လယ်ပြင်မှာ ဖြစ်မယ့် စစ်ပွဲကို အံ့ဩမှင်တက်စွာ ကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်…
ကဲ… ဘယ်လိုတွေ စွန့်စားခန်းဖွင့်ပြီး ဘယ်လိုရန်သူတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဦးမလဲဆိုတာ ကြည့်ရှုလိုက်ကြရအောင်နော်….
File Size : 1.35 GB / 1.07 GB
Mega.nz Myanmar2.35 GB Download Mega.nz Myanmar1.07 GB Download Soliddrive.co Myanmar2.35 GB Download Soliddrive.co Myanmar1.07 GB Download Vidcloud.co Myanmar2.35 GB Download Vidcloud.co Myanmar1.07 GB Download